"Hey Siri" tsy mandeha aminao? Andramo ireto vahaolana ireto | Vaovao IPhone
Avy amin'ny iPhone 6s / 6s Plus, ary azo alaina ao amin'ny iPad Pro farany teo ihany koa izany, afaka miantso an'i Siri amin'ny feontsika isika amin'ny alàlan'ny baiko hoe "Hey Siri". Azo atao izany noho ny mpiara-miasa M9, ​​izay mamela ny fitaovana hihaino foana nefa tsy misy fiantraikany amin'izany ny fizakantenany. Toy ny fiasa hafa rehetra, mety tsy mandeha ny "Hey Siri", saingy mora ny manamboatra azy io matetika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao Inona no hatao raha tsy mamaly ny asan'ny "Hey Siri" amin'ny iPhone na iPad-nao.
1 Vahaolana azo atao raha tsy mandeha ny "Hey Siri"
1.1 Manohana ny asany ve ny fitaovanao?
1.2 Izahay dia manamarina fa miasa io
1.3 Mifandray amin'ny Internet ve isika?
1.4 Izahay dia mamono ny fomba fampiasa ambany
1.5 Manery ny famerenana ny fitaovana izahay
1.6 Manamboatra indray ny «Hey Siri»
1.7 Miasa ve ny mikrô?
1.8 Mifandraisa amin'i Apple
Vahaolana azo atao raha tsy mandeha ny "Hey Siri"
Voalohany indrindra, tiako ny hanazava zavatra iray: ny fiasa "Hey Siri" miasa amin'ny iPhone io raha tsy voatahiry izy io. Manana izany ao anaty fonony lamba matevina aho ary tsy mamaly izany raha ao anatiny no ananako. Etsy ankilany, ny iPad Pro dia mety amin'ny tranga tsy ofisialy ary hamaly. Rehefa nohazavaina izany dia manohy manazava ny antony mety tsy hamalianao izahay.
Manohana ny asany ve ny fitaovanao?
Tsy mandeha ihany ny "Hey Siri" raha mampiasa iray amin'ireto fitaovana manaraka ireto izahay:
Izahay dia manamarina fa miasa io
Lojika, ho an'ny fiasa miasa, mendrika ny fihenam-bidy, it tsy maintsy ampandehanana. Raha hijery azy io dia mila mankany fotsiny isika Fikirana / General / Siri ary mampihetsika, raha tsy izany dia "Avelao 'Hey Siri'".
Mifandray amin'ny Internet ve isika?
Siri mila fifandraisana afaka miasa. Raha tsy mifandray amin'ny Internet isika dia hahita sary toa ilay iray teo aloha. Raha alefa izy dia mifandray isika; raha maharitra ela ny famaliana dia midika fa miadana ny fifandraisana, saingy misy izany. Raha misy, ara-dalàna, ho tsara kokoa hatrany ny mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi.
Izahay dia mamono ny fomba fampiasa ambany
Na dia tsy mandany angovo firy aza ny lahasa "Hey Siri" dia mandany betsaka kokoa noho ny tsy nampandehananay azy. Araka izany, tsy mandeha izany raha nampandehananay ny maody fanjifana ambany satria fantatr'i Siri fa te-hitsitsy angovo isika. Raha nampandeha ny maody hitsitsy angovo isika nefa tsy ilaina dia azontsika atao ny mamono azy io hiantso an'i Siri amin'ny feontsika.
Manery ny famerenana ny fitaovana izahay
Raha tsara daholo ireo voalaza etsy ambony ireo, ny dingana manaraka azontsika andramana dia ny mamerina ny iPhone na iPad. Raha mieritreritra isika fa te hamaha ny tsy fahombiazan'ny lozisialy kely dia afaka manoro hevitra aho manery reboot mivantana fa hamonjy fotoana foana isika (raha toa ka tsy nahavaha azy io ny famerenana amin'ny laoniny). Hanery ny famerenana ny iPhone na iPad izahay amin'ny alàlan'ny fanindriana sy hitazona ny ambiny ary hanombohana ny bokotra mandra-pahitantsika ny paoma. Ataovy ao an-tsaina fa tsy mila mamoaka ny bokotra isika mandra-pahitantsika ny paoma na, raha tsy izany dia hamono azy fotsiny isika.
Manamboatra indray ny «Hey Siri»
Mba hamalian'i Siri ny baiko malaza dia tsy maintsy ataontsika ny fanaingoana teo aloha. Ilaina io fanaingoana io mba hahafantarany ny feontsika ary tsy misy olona afa-tsy isika afaka mampihetsika azy. Tena marina io, saingy efa hitako ny fomba ahafahan'ny rahalahy manana feo mitovy amin'ny ahy mampihetsika azy tsy misy olana. HO AN'NY apetraka indray "Hey Siri" aloha dia tsy maintsy hamono ny fiasa isika avy eo amin'ny sehatra. Rehefa manetsika ny switch na miodina indray dia hiseho ny mpamosavy fandaminana. Mila manao izay lazainy fotsiny isika, fa kosa mamporisika anao hanao ilay dingana rehefa tsy misy tabataba be loatra na mety tsy hahomby amin'ny ho avy ny fanekena.
Miasa ve ny mikrô?
Raha manamboatra ny asany isika dia mety tsy ho maheno izay lazaintsika ilay fitaovana. Mety io fampiasa io ihany no tsy mahomby, noho izany dia hojerentsika raha toa ka avy amina fampiharana hafa izy io. Ohatra, afaka manandrana mandefa firaketana an-tsoratra amin'ny alàlan'ny WhatsApp izahay na mampiasa Dictation avy amin'ny rindranasa rehetra mamela io fiasa io. Raha tsy mandeha izy dia mety manana fonony manarona ny mikrô izahay, ka tsara raha jerena raha mandeha tsy misy fonony. Raha tsy mamaly ianao dia miroso amin'ny teboka manaraka.
Raha na eo aza ny zava-drehetra dia tsy mandeha izy io, satria ny dingana farany farany dia ny mifandray amin'ny Fanohanana an'i Apple. Raha ny olana dia fitaovana, dia mieritreritra aho fa ny tsy mandeha araka ny tokony ho izy dia ny mpiara-miasa amin'ny M9, fa ny serivisy teknikan'i Apple no milaza amintsika. Raha heverintsika fa ny iPhone 6s dia namidy tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa ary ny iPad Pro dia nanao izany tamin'ny volana martsa lasa teo, ny fitaovana rehetra mifanaraka aminy dia ao aminy fiantohana taona voalohany, noho izany dia mendrika ny fampiasana azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Siri » "Hey Siri" tsy mandeha aminao? Andramo ireo vahaolana ireo
Tsy mety amiko izany miaraka amin'ny 6s plus ... Miato irery izy io
Irina Alvarado dia hoy izy:
Ny hey Siri dia tsy mandeha foana ary mila mamerina mandahatra izany aho! Tarika io, ahoana no hataoko mba tsy hivadika ho aiko intsony?
Valiny tamin'i Irina Alvarado
gisella Jara dia hoy izy:
fangatahana, apetraho ny ios 11 fa tsy afaka mandefa siri amin'ny facebook.
Mamaly an'i gisella Jara
Tsara ny tolakandro, manana iPhone 6 plus aho ary tsy mihaino ahy ny SIRI, nanandrana nanala ny fonony aho ary mbola tsy mandeha ihany, fa nanandrana tamin'ny wuatssap aho ary raha mandeha ilay mikrô. ary siri amin'ny soratra raha toa ka mety izany.
Manantena aho fa ny valin-teninao.
Tsara ny tolakandro, manana iPhone 6 plus aho ary tsy mihaino ahy ny SIRI, nanandrana nanala ny fonony aho ary mbola tsy mandeha ihany, fa nanandrana tamin'ny wuatssap aho ary tsy mandeha ny mikrô. ary siri amin'ny soratra raha toa ka mety izany.
Manantena aho fa ny valin-teninao
Oscar Vásquez dia hoy izy:
Tahaka ny siri marobe ao amin'ny 6 plus tsy mandeha izy, mitranga amin'ny sasany izany ary mbola tsy hitako ny vahaolana, nanandrana namerina aza aho fa tsy nisy na inona na inona mihitsy, na izany aza mandeha ny microphone satria azoko atao ny manoratra, miantso, miantso amin'ny fanamafisam-peo, fa ny Siri dia tsy mihaino fotsiny ny olana, HAPOTSY VE IANAO?
Valiny tamin'i Oscar Vásquez
Yinnelly Isturiz dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, miasa ho ahy daholo ireo mikrô, toa ilay teo aloha ihany no nesoriko ny firakofana, ny mica ihany no miaro ny écran fa hitako fa mety amin'ny iphone-ko izy satria tsy manarona ny mikrô fa ny fakan-tsary . Hanana zavatra tsy mety izy. 🙁
Valiny tamin'i Yinnelly Isturiz
salama manana iphone 6 aho fa tsy miasa amiko i siri raha mihidy ny fitaovana, efa mavitrika io safidy io nefa mbola tsy mamaly ahy, inona no tokony ataoko?
Joaquin kast dia hoy izy:
Ao amin'ny iPhone 6 plus afaka mandefa hafatra WhatsApp, mpandahateny aho, saingy tsy mihaino ahy i Siri. ny zavatra manahirana dia ny hoe misy horonan-tsary eo alohan'ny fakan-tsary tsy misy feo.
Valiny tamin'i Joaquin Kast
Ny tsiambaratelo ao ambadiky ny zoro boribory ao amin'ny iOS
Nilaza i TaiG fa tsy hijanona ny asany mba handefasana jailbreak hafa